Mumwe weCentral Florida's Most Popular Dinner Shows
Medieval Times ndechimwe chezvitsva zvinowanikwa zvikuru zveOrlando. Dzokera shure munguva kuti uwane nyika yemagetsi, mabhiza, masvikiro, vanokudzwa uye kudya neminwe yako. Kune chimwe chinhu kune vose paMedeval Times, saka uyai nemhuri yose!
Chikamu nhau, chikamu chechidzidzo chidzidzo, Medieval Times inokuratidza kuti inokudzosera kuzana remakore rechi11, apo magetsi aizorwisana nekukudzwa kwevakadzi vakanaka.
Chiitiko chikuru ndicho chikwata. Zvizhinji zvekutya mabhiza nemagetsi, kushamwaridzana kunofadza, mhandara dzakanaka uye kurwisana-ruoko-kuru-ruoko kurwisana kunouya pamwe chete mukuratidzira kunofadza kwakagadzirirwa kugutsa vaenzi vezera rose. Munhu wose ari munhangemutange anokurudzirwa kufara nekuda kwekwenyeri inomiririra chikamu chake chekugara muimba, uye kuita kudaro kunowedzera kunakidza.
Kuvhenekera, mimhanzi, kutsvakurudza, nguva yekupfeka uye nyanzvi yekuongorora inyanzvi zvose zvinonakidza uye zvinowedzera pane zvakaitika.
Pavanenge vachifarira mutambo, vashanyi vanorapwa kune imwe yezvokudya zvemasikati zvinosanganisira tomato soda bhisiki, garlic chingwa, mbambo dzomukati, mbiriso yakakangwa, mbatata yakakangwa, uswa uye zvisina kunwa doro. Hummus, mhondi yemhonje, michero mitsva nemimwe mhando dzezvinomera zvinowanika kuburikidza nekukumbira. Panewo bharo yebasa yakazara yevanhu vakuru kuti vafare. Sezvo chinotapira sezvinoitwa kudya, pane chimwe chigadziro shure kwechiito chekuratidza, saka iwe unoda kutarisa kubva pamba yako pane imwe nguva.
Kune vazhinji vakakokwa, kunyanya vana, chikamu chakanakisisa pamutambo chiri kudya pasina midziyo. Kune chimwe chinhu pamusoro pekudya neminwe yako kubva kumataipi epelita anoita kuti zvokudya zvive zvakanaka zvakanyanya. Asi usanetseka pamusoro pekushayikwa chinhu; iyo mahwendefa emabiko uye nzvimbo yekugara-temberi inoreva kuti iwe unogona kutarisa kuratidzwa apo uchizadza dumbu rako.
Kana iwe uri munhoroondo, iva nechokwadi chekutarisa Medieval Village pamberi pekutamba kwekutamba. Sezvaunenge uchidzungaira, iwe uchasangana nemakamuri masere ane vashandi venguva yepakati, kusanganisira coppersmiths, weaver and potters. Idzimba dzimba nezvose zviri mukati ndezvechokwadi nguva. Kunewo Horo yeArms apo iwe unogona kutarisa mabhizimisi emakore ekumazana uye mushure mekutambudza musamu. Ichi chikamu chesimba chinogona kuva chakasimba zvikuru kune vamwe vana.
Chipo chikuru chechipo chiri mukati meChina, uye mifananidzo yemikana inowanikwa kune vose vakashanyira. Zvinhu zvinotengeswa muchitoro chiri mumutengo kubva pamutengo unotengesa kunodhura zvikuru.
IOorlando-Kissimmee Castle, iyo yaiva yekutanga Medieval Times kuti izarurire muNorth America, inopa mapoka evanhu uye inoderedza mitengo yekugamuchira kuFlorida vagari vemo. Kupfeka kunowanzoitika uye kupiwa zviduku kunowanika paIndaneti. Makomo masuo akazarura masaminiti makumi manomwe musati apera nguva, uye kugara kwekutanga kunouya, kutanga kushandiswa. Svika nekukurumidza kana zvichida kana iwe uchida maonero akanaka emukwikwi, uye wotora nguva yako kufamba-famba muimba.
Vakuru $ 62.95
Vana 12 & Under $ 36.95
King's Royalty Package (inopfuura $ 40 yekutengeserana kwepamusoro uye kugara kwepa premium)
Wedzera iyi purogiramu ye $ 22 chete kune mumwe munhu.
VIP Chokutanga Row, Zvose Zvikamu Zvokugara, kana Chipiri Row muChechi Chikamu
Mutumbi weChipinda Chekupinda Photo
Kunze kweChechi DVD (rimwe zuva rimwe)
Celebration Package (inopfuura $ 40 yekutengesa mutengo)
Wedzera iyi purogiramu ye $ 18 chete pamunhu wese.
Girafu Mufananidzo weNhengo imwe neimwe yeChechi
Chikamu cheKuberekwa Kwekuberekwa kweNhengo imwe neimwe yeChechi
Kuziviswa Kwemunhu Pakuzorora
Royalty Package (inopfuura $ 20 mutengo wekutengesa)
Wedzera iyi purogiramu ye $ 12 chete kune mumwe munhu.
Kana Iwe Uchienda:
Telefonhare : (407) 396-2900
Maawa: Nguva dzekuratidza dzinosiyana usiku. Ndapota tarisai webhusaiti yehuwandu hwemashoko akavandudzwa.
Zvinhu Zvokuita muOrlando When It Rains
UCF Downtown Orlando Campus
Children's Birthday Party Mahara muOrlando Area
Kwamunoenda kuIsita Brunch muOrlando
Goa Gajah: Bali's Eerie Elephant Cave
Nzvimbo 7 dzakanakisisa munzvimbo muNyika kuenda Bungee Jumping
Prague muna July: Zvakanaka Mamiriro Evanhu, Makungu Makuru
Festival yeLatinino muWashington, DC: Fiesta DC 2018
Zuva revakafa / El Dia de los Muertos
Kuenderera Kunyika yeKanada
Dambudziko Rekunyangadza Kunotyisa muWorld City
Nzira 10 dzakanakisisa paWorld Studios Hollywood
Eco-Friendly Products ne Stores muAlbuquerque
Yakawanda Inotasikirwa muCheck Rock 2016
Long Island City (LIC): Vavakidzani uye Nhoroondo